July 5, 2019 - CeleLove
July 5, 2019 Cele Love 0
ရုတ်တရက်ခေါင်းမူးတတ်တာကိုပျောက်ကင်းစေမယ့် ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်း(၅)မျိုး တခါတလေ ခန္ဓာကိုယ်ကအရမ်းအားနည်းတဲ့အခါ ရုတ်တရက်ခေါင်းတွေချာချာလည်နေအောင်မူးသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခြေအနေအရမ်းမဆိုးရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းနိုင်ပေမယ့် ၊ အခြေအနေအရမ်းဆိုးတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ရပ်တောင်မရပ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုရုတ်တရက်ခေါင်းမူးတတ်တဲ့သူတွေက ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို ပုံမှန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ခေါင်းမူးတတ်တာ တဖြည်းဖြည်းသက်သာပျောက်ကင်းလာပါလိမ့်မယ် နော် …… (၁) တစ်နေရာထဲကိုစူးစိုက်ကြည့်ပါ ” ထိုင်ခုံတစ်ခုမှာ မတ်မတ်ထိုင်ပြီး မျက်လုံးနဲ့တည့်တည့်နေရာကို ခဏလောက်စူးစိုက်ကြည့်ပေးပါ။ […]
အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအတွက်မဖြစ်မနေလုပ်ပေးသင့်တဲ့ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း(၅)မျိုး အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် နောက်ကျောနဲ့ တင်ပါးဆုံနေရာတွေ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းမွန်ပြီး အညောင်းမမိဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်သွေးလှည့်ပတ်မှုပုံမှန်မဟုတ်တာက သားအိမ်နဲ့မွေးလမ်းကြောင်းရောဂါတွေ၊ ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာတာတွေ၊ နောက်ကျောအောက်ပိုင်းအောင့်တာတွေ၊ အူလမ်းကြောင်းရောဂါနဲ့ လိပ်ခေါင်းရောဂါတွေပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေမဖြစ်ရအောင် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ ယောဂကျင့်စဉ်လေးတွေနဲ့ ကာကွယ်ထားလိုက်ရအောင်နော် ….. (၁) လိပ်ပြာပုံ ” ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ […]
ဆရာမ နှင်းနု နဲ့ သီးသန့် မေးမြန်းခန်း …
ဆရာမ နှင်းနု နဲ့ သီးသန့် မေးမြန်းခန်း … ဆရာမ နှင်းနုကတော့ “ကိုကို လုပ်တယ်လို့ ကျွန်မကို လာ မတိုင်ဘူးရှင့် ” “အဲဒီ ကိုကို ကိုလည်း ကျွန်မ မဆူ လိုက်ဘူးရှင့်…” ဆိုပြီးပြောပါတယ် …။ ဒေါ်နှင်းနှင်းနု ဆရာမ၊ Wisdom […]
တကယ်မချစ်ပဲ လိင်ကိစ္စကြောင့်သာ တွဲနေတဲ့သူမှန်းသိနိုင်မယ့် အချက်(၅)ချက် တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တဏှာစိတ်သက်သက်နဲ့သာ တွဲတတ်ကြ ပါတယ်။ ဒီလိုယောက်ျားလေးတွေဟာ တကယ်ကို ယုတ်ညံ့ပြီး အောက်တန်းကျသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူ မျိုးတွေကို ပတ်သက်မ်ိနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး နောက်လှည့်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. […]
” မဟုတ်ဘဲနဲ့ စွပ်စွဲခံရတဲ့အတွက် ထောင်ထဲမှာ နေနရပါပြီ ” အမှန်တရားဘက်ကို ရပ်တည်ပေးကြပါ ” ….. ( တရားခံဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ အောင်ကြီး နှင့် အထူးအင်တာဗျူး )
” မဟုတ်ဘဲနဲ့ စွပ်စွဲခံရတဲ့အတွက် ထောင်ထဲမှာ နေနရပါပြီ ” အမှန်တရားဘက်ကို ရပ်တည်ပေးကြပါ ” ….. ( တရားခံဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ အောင်ကြီး နှင့် အထူးအင်တာဗျူး ) “အမှန်တရားဘက်ကို ရပ်တည်ပေးကြပါလို့ ကျွန်တော် တောင်းဆိုချင်ပါတယ်” ….. အောင်ကြီး ( မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သည်ဟု […]
Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှ အရာရှိများကို အရေးယူပြီး အပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းခိုင်းမည်… …
Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှ အရာရှိများကို အရေးယူပြီး အပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းခိုင်းမည်… … နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၅ (သတင်းတမန်) – အသက် ၂ နှစ်ကျော်မိန်းကလေးငယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုကျင့်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် wisdom hill မူကြိုကျောင်းကို ကျောင်းတည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ပေးတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကပြောသည်။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက “တရားမ၀င်ကျောင်းဖြစ်နေတယ်။ […]
မိုးကောင်းမြို့နယ်၌ ၁၅ နှစ်အရွယ်သမီးအရင်းအား ဖခင်ဖြစ်သူမှ အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ် အင်ကြင်းကုန်းကျေးရွာ၌ ၁၅ နှစ်အရွယ်သမီးအရင်းအား ဖခင်ဖြစ်သူမှ အလိုမတူပဲ သားမယားပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့၍ ဇူလိုင် ၅ ရက်က ပင်းဘောနယ်မြေရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ် …။ ဖြစ်စဉ်မှာ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ […]
နေပြည်တော်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကို သမ္မတကိုယ်တိုင် အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးသင့်ဟု ဆို ….
နေပြည်တော်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကို သမ္မတကိုယ်တိုင် အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးသင့်ဟု ဆို …. နေပြည်တော်ရှိ Wisdom Hill ကျောင်းတွင်တက်ရောက်နေသည့် ၃ ခန့်အရွယ်ကလေးငယ် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်တိုင် အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့ နေဦးငိုင်ဆာ့ခ်က အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်သည်။နေပြည်တော်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကို သမ္မတကိုယ်တိုင် အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးသင့်ဟု ဆိုပါတယ် […]
သိန်း ၅၀၀ ယူပြီး သူ့သားကို လူစားထိုးတာမဟုတ်ကြောင်း တရားခံအောင်ကြီး အမေရင်ဖွင့် ( ရုပ်သံ )
သိန်း ၅၀၀ ယူပြီး သူ့သားကို လူစားထိုးတာမဟုတ်ကြောင်း တရားခံအောင်ကြီး အမေရင်ဖွင့် ( ရုပ်သံ ) လက်ရှိ အွန်လိုင်း တခွင်မှာ ပျံ့နှံ့ နေတဲ့ နေပြည်တေယ် Wistom Hill ကျောင်းက ဗစ်တိုးရီးယား ကလေးမလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကိုတော့ မသိတဲ့သူ မရှိလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ […]
ဒရိုင်ဘာ ဟာ ကလေးငယ်ကို လက်နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခဲ့တာလို့ ဒုရဲချုပ်ပြော
ဒရိုင်ဘာ ဟာ ကလေးငယ်ကို လက်နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခဲ့တာလို့ ဒုရဲချုပ်ပြော နေပြည်တော် မူကြိုကျောင်းက ကလေးငယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာ သံသယတရားခံ ယာဉ်မောင်းက ကလေးငယ်ကို လက်နဲ့ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဒုတိယ ရဲချုပ်ကပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုသံသယရှိသူအောင်ကျော်မိုးဟာ ပြုလုပ်သူဖြစ်တယ်လို့ ကလေးကိုယ်တိုင်က ထွက်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်ဟာ […]